Safal Khabar - ब्रत बसेको दिन यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ धर्मशास्त्रमा
ब्रत बसेको दिन यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ धर्मशास्त्रमा
सोमबार, ०६ साउन २०७६, १७ : ५३
काठमाडौं । व्रत बसेको दिन यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? हिन्दू धर्मशास्त्रमा महिला व्रत बसेको दिन यौन सम्पर्क गर्न नहुँने उल्लेख छ । दिनभर भगवानको नाममा उपवास बसेकी महिलामाथि सहवासको कुरा सोच्न पनि नहुने हिन्दूशास्त्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो बेलामा शरीरमा पानी, ग्लुकोज तथा क्यालोरीको कमी हुने भएकाले महिलाहरु यौनसम्पर्कका लागि तयार हुन कठिन हुने भएकाले आफ्नो पार्टनरको मनोभावनालाइ बुझेरमात्र यौनसम्पर्क गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।